Vazaha nanolana zaza tsy ampy taona - Voasazy higadra hiasa an-terivozona 10 taona
Hatramin'ny nisokafan’ny raharaham-pitsarana ady heloka bevava andiany voalohany tamin' ity taona 2017 ity ny alatsinainy 12 jona lasa teo, dia saika nitazona toerana maro teo amin'ny antontan-taratasin' ady tsaraina, ny raharaha fanolanana sy fanodinkodinana ankizy tsy ampy taona. Ny zoma 16 jona teo no niakatra Fitsarana ady heloka bevava ny raharaha herisetra sy fanolanana ankizivavy 12 taona nataon' i Alain Jean René de la Nix antsoina hoe Vazaha. Na izany aza dia anisan'ny nahavariana ny mpanara-baovao ny tsy nanatrehan’ny voampanga ny fotoam-pitsarana. Tsy tonga ihany koa ny mpitory sy ny vavolombelona.
Tamin'ny 14 septambra 2016 no nisehoan'ny raharaha tao Analamboanio-Toamasina. Raha ny famakiana ny taratasin'ady navoakan’ny famotorana teo anivon’ny polisy sy ny Mpitsara mpanao famotorana, dia nilalao teo an-tokontany ity ankizikely mbola voatavo tsy mifandraka ity ka nampanantsoin' i Alain Jean René ary nampidiriny tao an-tranony sady nakatony ny varavarana. « Notambazany hanao firaisana aho fa tsy nanaiky ary nilaza fa omeny vola 10 000 Ariary nefa tsy nanaiky hatrany ka notereny », hoy ny voarakitra tamin'ny taratasy nanaovana famotorana ilay zaza 12 taona.
Vokatr’ireo rehetra ireo dia nanamafy ny teo anivon'ny Fampanoavana ambony fa voamarina ny fisian'ny herisetra sy fanolanana natao tamin'ity zaza ity. Vokany, taorian'ny dinika fohy nifanaovan'ny Mpitsara mpamoaka didy dia tsy nisalasala ireto farany fa nilatsaka ny sazy henjana ka voaheloka 10 taona sazy an-terivozona i Alain Jean René de la Nix na i Vazaha ary noho ny tsy nanatrehany ny fotoam-pitsarana dia namoahana didy fampisamborana izy.